खानेपानीको अनुगमनमा उपभोक्तालाई कार्वाही . – Sabaikoaawaj.com
खानेपानीको अनुगमनमा उपभोक्तालाई कार्वाही .
बुधबार, माघ २६, २०७३ 7:09:42 PM	मा प्रकाशित
पोखरा २६ माघ , नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा शाखाले अनियमितता गर्ने उपभोक्तामाथी कार्वाहीलाई तिव्रता दिएको छ । मिटर निकालेर पानी चोरी गर्ने उपभोक्तालाई कार्वाही गरिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । पोखरा शाखाले बुधबार पोखरा–६ वैदाम शान्तिपाटनमा रहेका उपभोक्तामाथि अनुगमन गर्दा टेकनाथ वराल, दुर्गा पौडेल, र्धुव सुवेदी र नीलकण्ठ वराल लगायतका उपभोक्ता कार्वाहीमा परेको अनुगमन टोली प्रमुख विष्णुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
मिटर रिडिङ गर्दा मिटर लाइनमै रहेको भएपनि अनुगमन गर्दा उपभोक्ताले नियतवस पानी चोरी गरेको अनुगमन टोलीले जानकारी दियो । खानेपानी संस्थान पोखराले वक्यौता महशुलको विषयमा गम्भिर वनेको जनाउँदै आएको छ । संस्थान स्रोतले पोखराका केही प्रतिष्ठित उद्योग तथा नाम चलेका व्यक्तिहरुकै तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको महशुल प्रमुख कमलकान्त लामिछानेले जानकारी दिए । पोखरामा पानीको सुविधा लिएपनि महशुल तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको लामिछानेले जनाए ।
पोखरामा करिव १७ करोड रुपैयाँ महशुल उढ्न वाँकी रहेको संस्थानले जनाएको छ । संस्थान स्रोतले नयाँ धारा जडान गर्दा कार्यालयमा तिर्ने कर वाहेक अन्य कुनै रकम तिर्नु नपर्ने जनाएको छ । केही कर्मचारीको मिलेमतोमा उपभोक्ताबाट मोटो रकम असुल्ने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्दै पोखरा शाखाले उपभोक्तालाई सूचना प्रदान गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । अनुगमन टोलीले पोखरा शाखा अन्तर्गत विन्ध्यावासिनी इकाई कार्यालयका उपभोक्ताहरुको समेत अनुगमन गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ २६, २०७३ 7:09:42 PM